ရခိုင်ပြသနာနှင့် ရာဇာပလ္လင် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
ရခိုင်ပြသနာနှင့် ရာဇာပလ္လင် ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) Author: lu bo | 8:30 PM | No မှတ်ချက် | U Hla WinFollow
ရခိုင်ပြဿနာက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဘာကြောင့် ဦးအေးမောင် ဒီနေ့ အထိ
မသိသေးတာလဲ။ ဦးသိန်းစိန်ခေတ်ကတည်းက ဒီပြဿနာကို အလွန် သတိထားပြီး ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဿနာက အလွန် သိမ်မွေ့တယ်။
ဒီစကားကို သူ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆွယ်တုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ဥပဒေနှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ စကားပါ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သူ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်၊ တရားစွဲနိုင်တဲ့ အပြောအဆို…။ ဘာကြောင့်လဲ။ အချုပ်အခြာ အာဏာ (Sovereignty)ဆိုတာက ပြည်ထောင်စုမှာမှ ရှိတာ။
ပြည်နယ်က တောင်းလို့ မရဘူး။
(၂) “ပြင်ဦးလွင် စစ်တက္ကသိုလ်ဆိုတာ Year 1
to Year4လား မသိဘူး။ အားလုံး မူဝါဒ အရပဲ သင်တာကိုး။ အဲဒီမှာ ကရင် အကြောင်းလည်း မကောင်းတာ ပါမှာပေါ့။ ရခိုင်အကြောင်းလည်း မကောင်းတာ ပါမှာပေါ့။ အဖွဲ့အစည်းကို ဆန့်ကျင်ရဲအောင် သင်မှာပေါ့။”
တိုတို ပြောရရင်တော့ ဒီနေ့ ရခိုင် (ANP) ပါတီက ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဦးဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ။ ဟော… တနေ့က ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ “ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း” အမိန့်ကို ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုကို လွှတ်တော်မှာ တင်တယ်။
ရခိုင် ပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားကြတော့မှာလား။ ဆန္ဒပြတာ၊ ကန့်ကွက်တာတွေပဲ လုပ်နေကြတော့မှာလား။ ဘယ်သူ နစ်နာမလဲ။
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ဘာမှ အသုံးမဝင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာက တော်တော်လေးကို ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဆင့်က တွေ့ရှိချက် အကြံပြုချက်ကို တင်ပြရုံ အဆင့်သာ
ရှိပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရမှာက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တာဝန် ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုချက်ရဲ့ ၂၀(နှစ်ဆယ်) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုး ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင် အစီရင်ခံ စာကြီးဟာ ဘာမှ လက်တွေ့ အသုံးမကျခဲ့ပါဘူး” ... တဲ့။
ဒီပြဿနာမှာ ကျွန်တော် အအံ့သြဆုံးက စစ်တပ်မှ အမတ်မင်း (၂၅)ရာခိုင်နှုန်းက ANP ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးအေးမောင်တို့ ပေးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ပြုမှုမျိုးကို လွှတ်တော်မှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေတ်လွန် အချိန်မှာ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်ကြိုက်
မကြိုက်ကြိုက် အဖြစ်နိုင်ဆုံး နံပါတ်(၂) ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ပိုပေးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ မှန်ပါ တယ်။ ဒီပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစီးချုပ်အနေနှင့် ပြည်သူကို ရှင်းပြပါ။
*ဦးသန်းရွှေ ခေတ်က ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမျိုးကို ရေးဆွဲသွားခဲ့တာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်က ဒီမို
ကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းလဲတဲ့ဆီမှာ ထွက်ပေါက်… အင်္ဂလိပ်လိုတော့… Egress… အဖြစ် သုံးခဲ့တာ။
ဦးလှဝင်း (လေသူရဲတစ်ဦး) ၈. ၉. ၂၀၁၆